ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ~ Htet Aung Kyaw
11:30 PM Htet Aung Kyaw No comments
လာမဲ့အင်္ဂါနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ဟာ ၆၆ ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ပါ။
စာဖတ်သူတွေ အဲဒီနေ့မှာ ဘာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားသလဲ။
နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်မှာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြည်ထောင်စုအလံသယ်တာ၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ ယဉ်ကျေးမှုကပွဲမျိုးစုံကျင်းပတာ၊ အားကစားပွဲတွေကျင်းပတာနဲ့ပဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အဲ...နေပြည်တော်က သမ္မတနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့ ယဉ်ကျေးမှုကပွဲကိုကြည့်ပြီး ရှန်ပိန် သောက်ရင်း၊ ညစာစားရင်းနဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲကျင်းပပေ့ါ။
ပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း၊ ပင်လုံစာချုပ်ပါ အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေ၊ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုနေရဲ့အရေးပါပုံတွေ၊ အဲဒီကတဆင့် ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခဲ့ရပုံတွေကို အထက်ဖေါ်ပြပါ အခန်းနားတွေမှာ ပြောဆိုဖို့ ပျက်ကွက်နေဆဲဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုနေ့သမိုင်းကို လေ့လာချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက် ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်လက် တွေနဲ့ အဲဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲ၊ တနည်းအားဖြင့် လူမျိုးစုတွေခွဲထွက်မှာစိုးလို့ အာဏာသိမ်းရပါတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈ မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ ၁၀-နှစ်ပြည့်နေ့ အကျပ်တည်းအကြောင်း (အခန်း ၁၀၊ ပုဒ်မ ၂၀၁၊ ၂၀၂ တွေကိုကြည့်ပါ CHAPTER XRIGHT OF SECESSION,
201. Save as otherwise expressly provided in this Constitution or in any Act ofParliament made under section 199, every State shall have the right to secede from theUnion in accordance with the conditions hereinafter prescribed.
202. The right of secession shall not be exercised within ten years from the date onwhich this Constitution comes into operation. ) တွေကို ပြည်ထောင်စုနေ့အမှီ ရှာဖွေ (ကူးယူ) တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Reference: This text is taken from pp404–405 of Hugh Tinker's Burma: The Struggle for Independence 1944-1948 (Vol. II) London, HMSO 1984.